Qoysas Burburay waa Qaran Burburay - Daryeel Magazine
Waxaa laga yaabaa in aad in badan is waydiisid Soomaalia maxay dawlad ugu soo noqon la’dahay? Waa su’aal in badan dadka Soomaaliyeed madaxooda ka guuxaysa. Hadaba waa maxay sababtu? Iyadoo ay jiraan siyaabo kala duwan oo lagu macnayn karo sababta, haddana waxaa jira mid ka mid ah sababahaas oo laga yaabo dadka qaarkood inaysanba u arag inay dowladnimada qayb wayn ka tahay. Taasi waa burburka qoysaska Soomaaliyeed iyo caruurta rajadoodii luntay.
Waa Maxay Cudurka Neefta? Waa Maxay Curiyaha Magnesium? Waa Maxay Nabaddu? Waa Maalinkaagii